News Collection: महिला १०, पुरुष १९
महिला १०, पुरुष १९
पुरुषहरूको मस्तिष्कमा प्रत्येक सात सेकेन्डमा यौनबारे कुरा खेल्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । 'जर्नल अफ सेक्स रिसर्च' मा प्रकाशित नयाँ अध्ययन परिणामअनुसार, पुरुषहरू एक दिनमा औसत १९ पटक रतिरागात्मक सोचाइमा समय व्यतीत गर्छन् । अर्थात्, प्रत्येक ५० मिनेटमा एकपटक ।
यौन चिन्तनमा पुरुषहरू महिलाको तुलनामा अगाडि रहेको ओहियो स्टेट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । महिलाहरू प्रतिदिन कम्तीमा १० पटक त्यस्तो सोचाइमा भुल्ने गर्छन् । महिलाहरू यौनभन्दा खानपिनबारे बढी सोचमग्न हुने गर्छन् ।
यसबारे अध्ययनमा २ सय ८३ कलेज विद्यार्थीलाई सामेल गरिएको थियो । छात्रा १ सय ६३ जना थिए भने छात्र १ सय २० जना । सबैको उमेर उमेर १८ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म थियो । उनीहरूलाई सोधिएको थियो, 'दिनहँु कतिपटक यौनबारे सोचाइ आउने गरेको छ ?'
छात्रहरूको औसत उत्तर रह्यो- १९ पटक । छात्राहरूले भनेअनुसार, उनीहरू औसतमा प्रतिदिन १० पटक यौन सोचाइमा रम्दा रहेछन् । अर्कातर्फ, उनीहरू दिनहुँ १५ पटक खानपिनबारे सोच्दा रहेछन् ।
१९ प्रतिशत भारतीय दिनहुँ
यौनक्रियाका मामिलामा भारतीयहरू रुचि बढ्दो क्रममा रहेको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार १९ प्रतिशत भारतीय दिनहँु समागममा सामेल हुन्छन् । सातामा तीनदेखि पाँचपटकसम्म सहवासको इच्छा राख्ने भारतीयहरूको संख्यामा वृद्घ िभइरहेको छ ।
२० प्रतिशत भारतीय यौनक्रियामा सक्रिय रहने सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यो सर्वेक्षणमा एक हजार व्यक्तिसँग उनीहरूको यौन जीवनबारे प्रश्न गरिएको थियो । २६ प्रतिशतले आफूहरूले सातामा दुईदेखि तीन पटकसम्म यौनानन्द उठाउने गरेको बताए । १५ प्रतिशतले एकदेखि दुई महिनासम्म दुईपटक मात्रै यौनसम्पर्क राख्दा रहेछन् ।
पैसालाई महत्त्व दिँदा बिग्रन्छ दाम्पत्य
भनिन्छ, पैसाले सुबै सुख किन्न सक्छ । तर साँचो माया किन्न सक्दैन । नयाँ अध्ययनले यो भनाइको पुष्टि गरेको छ । त्यसअनुसार, पैसाप्रति आवश्यकताभन्दा बढी मोहले तपाईंको वैवाहिक सम्बन्धलाई बिगार्न सक्छ । यो अध्ययन प्रतिवेदन 'जर्नल अफ कपल एन्ड रिलेसन थेरापी' मा प्रकाशित छ ।
बढी भौतिकवादी दृष्टिकोण राख्ने वा पैसाको पछाडि लाग्नेहरूको वैवाहिक जीवन पैसालाई बढी महत्त्व नदिने जोडीको दाँजोमा निकै कम हाँसीखुसीले बित्ने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । प्रा. जेसोन क्यारोल भन्छन्, 'यो धारणा सबै आय वर्गकालाई लागू हुन्छ ।'